Eihei Dogen ဂျပန် Soto ဇင်၏တည်ထောင်သူခဲ့
ဂျပန် Soto ဇင်၏တည်ထောင်သူ
ထို့အပြင် Dogen Kigen သို့မဟုတ် Dogen Zenji ကိုခေါ် Eihei Dogen (1200-1253), တည်ထောင်ခဲ့ပြီးသူတစ်ဦးဂျပန်ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းတော်ကြီးခဲ့ Soto ဇင် ဂျပန်တွင်။ ထို့အပြင်သူသည်ခေါ်တော်မူသည်သူ၏အရေးအသားများစုဆောင်းခြင်းများအတွက်လူသိများသည် Shobogenzo , ကမ္ဘာ့ဘာသာရေးစာပေ၏လက်ရာ။
Dogen တစ်ခုများသည်မင်းမျိုးအနွယ်ဝင်မိသားစုသို့ကျိုတိုမွေးဖွားခဲ့သည်။ သူဟာ4ခဲ့အချိန်အားဖြင့်ဂျပန်နှင့်ဂန္နှစ်ဦးစလုံးတရုတ်ဖတ်ရှုဖို့သင်ယူသူတစ်ဦး prodigy ပါပြီဟုလျှောက်ခဲ့သည်။
သူကသေးသေးငယ်တဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်နေစဉ်သူ့မိဘနှစ်ယောက်စလုံးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ သူ7သို့မဟုတ် 8 အခါသူ့အမိ၏အသေခံခြင်း, အသက်တာ၏အနိစ္စသူ့ကိုသတိထားမိအောင်, အထူးသဖြင့်နက်ရှိုင်းစွာသူ့ကိုထိခိုက်ခဲ့သည်။
အဆိုပါမိဘမဲ့ကောင်လေးဂျပန်ဧကရာဇ်တစ်ဦးအစွမ်းထက်အလွန်ထားရှိအကြံပေးသူတစ်ဦးဦးလေးဖြင့်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။ အဆိုပါဦးလေးငယ်ရွယ် Dogen အရေးကြီးသောဗုဒ္ဓဘာသာကျမ်း၏လေ့လာမှုပါဝင်သည်ပေးသောအကောင်းတစ်ဦးပညာရေး, လက်ခံရရှိကမြင်တော်မူ၏။ သူ9အခါ Dogen, ရှစ်အသံအတိုးအကျယ် Abhidharma-kosa ဗုဒ္ဓဘာသာအတွေးအခေါ်၏အဆင့်မြင့်အလုပ်ဖတ်ပါ။
သူက 12 သို့မဟုတ် 13 တုန်းက Dogen ကြောင်းဦးလေး၏အိမျတျောကိုစှနျ့ဗိမာနျတျောသို့သှားကွ၏ တောင်ပေါ်မှာ Hiei ပေါ် Enryakuji အခြားဦးလေးတစ်ဦးယဇ်ပုရောဟိတ်အဖြစ်အမှုဆောင်ခဲ့သည်ရှိရာ။ Dogen Enryakuji သည်တစ်ဦးကြီးမားတဲ့ဗိမာန်တော်၌ရှုပ်ထွေးဝန်ခံခံရဖို့အဘို့ဤဘထွေးစီစဉ်ပေး Tendai ကျောင်းတွင်။ ကောင်လေးက Tendai ဘာဝနာများနှင့်လေ့လာမှုမှာမိမိကိုယျကိုစွဲလန်းနှစ်သက်, သူသည်အသက် 14 နှစ်မှာဘုန်းကြီးတစ်ပါးစီရင်ခံခဲ့ရသည်။
ဒါဟာမေးခွန်းတစ်ခုသူ့ကိုမှာဒေါသထှကျရမှစတင်ခဲ့ကြောင်းတောင်ပေါ်မှာ Hiei မှာ Dogen ရဲ့ဆယ်ကျော်သက်နှစ်တာကာလအတွင်းဖြစ်ခဲ့သည်။
မိမိအဆရာများအားလုံးသတ္တဝါနှင့်ပြည့်စုံလျက်ရှိသောသူ့ကိုပြောပြသည် ဗုဒ္ဓသဘာဝတရား ။ အမှုဖြစ်ခြင်း, အဘယ်ကြောင့်လိုအပ်သည့်လေ့ကျင့်ခြင်းနှင့်သစ္စာဉာဏ်အလင်းကိုရှာခြင်းငှါခံခဲ့ရသလော
မိမိအဆရာများသူ့ကိုကျေနပ်ကြောင်းမထူးကိုပေးတော်မူ၏။ - နောက်ဆုံးအနေနဲ့တဦးတည်းသူဂျပန်အသစ်ခဲ့ကြောင်းဗုဒ္ဓဘာသာတစ်ဦးသည်ကျောင်းနေတဲ့ဆရာမထွက်ရှာသောအကြံပြု ဇင် ။
နှစ်ပေါင်းမတိုင်မီ Eisai (1141-1215), Enryakuji နောက်ထပ်ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါး, တရုတ်အတွက်လေ့လာဖို့တောင်ပေါ်မှာ Hiei ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ သူကတစ်ဦးဆရာအဖြစ်ပြန်ဂျပန်ဆီသို့ရောက် လာ. , Linji, ဒါမှမဟုတ်လင်း-chi ဂျပန်တွင်ဟုခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုခံရလိမ့်မယ်အရာ, ချမ်းဗုဒ္ဓဘာသာကျောင်း, Rinzai ဇင် ။ ဒါဟာအချိန်အားဖြင့် 18 နှစ်အရွယ် Dogen ကျိုတိုမှာရှိတဲ့ Eisai ရဲ့ဗိမာနျတျော Kennin-ji ရောက်ရှိခဲ့ပြီး, Eisai ပြီးသားသေများနှင့်ဗိမာနျတျော Eisai ရဲ့တရားဓမ္မအမွေဆက်ခံသူ Myozen ကဦးဆောင်ခဲ့ဖွယ်ရှိသည်။
Dogen နှင့်မိမိဆရာ Myozen တရုတ်ခုနှစ်တွင် 1223. အတွက်အတူတကွတရုတ်နိုင်ငံသို့သွားရောက်ခဲ့သည်, Dogen ချမ်းဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်အရေအတွက်ခရီးသွားလာမိမိလမ်းသို့သွားကြ၏။ ထို့နောက် 1224 ခုနှစ်တွင်သူသည်ယခု Zhejiang ၏အရှေ့ပိုင်းကမ်းရိုးတန်းပြည်နယ်သည်အဘယ်အရာတှငျနထေိုငျသူမြား Tiantong Rujing အမည်ရှိဆရာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ Rujing လို့ခေါ်တဲ့ချန်းကျောင်းတစ်မာစတာခဲ့ Caodong တရုတ်နိုင်ငံတွင် (သို့မဟုတ် Ts'ao-Tung), နှင့်ဂျပန်နိုင်ငံများတွင် Soto ဇင်ဟုခေါ်တွင်စေလို။
Rujing အဆိုပါ zendo circumambulating ခံခဲ့ရသည်အဖြစ်တစ်ခုမှာနံနက် Dogen သည်အခြားဘုန်းတော်ကြီးများနှင့်အတူ zazen ထိုင်လျက်ခဲ့သည်။ ရုတ်တရက် Rujing အိပ်ပျော်ကျသွားများအတွက် Dogen ဘေးမှာဘုန်းတော်ကြီး berated ။ "zazen များ၏အလေ့အကျင့်ပျောက်ခန္ဓာကိုယ်နှင့်စိတ်ကို drop ဖြစ်ပါတယ်!" Rujing ကဆိုသည်။ "သင် dozing အားဖြင့်ပြီးမြောက်ဖို့ဘာကိုမျှော်လင့်သလဲ?" စကားတော်မှာ "ခန္ဓာကိုယ်နှင့်စိတ်ပျောက်ကျဆင်းနေ" Dogen နက်သဘောပေါက်တွေ့ကြုံ။ နောက်ပိုင်းတွင်မိမိသင်ကြားရေးအတွက်မကြာခဏ "ခန္ဓာကိုယ်နှင့်စိတ်ကိုရုတ်သိမ်း" ဟုအဆိုပါထားသောစာပိုဒ်တိုများအသုံးပြုနိုင်သည်ပေသည်။
အချိန်မှာတော့ Rujing သူ့ကိုဆရာရဲ့အင်္ကျီပေးခြင်းနှင့်တရားဝင် Dogen သည်သူ၏တရားဓမ္မအမွေဆက်ခံသူဖြစ်ကြေညာခြင်းဖြင့် Dogen ရဲ့သဘောပေါက်အသိအမှတ်ပြုခဲ့ကြသည်။ Dogen 1227 ခုနှစ်တွင်ဂျပန်နိုင်ငံသို့ပြန်ပြီးလျှင်, Rujing ထက်နည်းတစ်နှစ်အကြာတွင်သေဆုံးခဲ့ပါသည်။ တရုတ်ရှိနေစဉ် Myozen လည်းသေဆုံးသွားခဲ့, ဒါကြောင့် Dogen သည်သူ၏ပွာနှငျ့ဂျပန်ပြန်သွားကြ၏။
Dogen Kennin-ji မှပြန်လာသောသုံးနှစ်အဘို့ထိုအရပ်၌သင်ပေးခဲ့တယ်။ သို့သော်ဤအချိန်အားဖြင့်ဗုဒ္ဓဘာသာအားမိမိချဉ်းကပ်ကျိုတိုကြီးစိုးသော Tendai အျောသိုဒေါထံမှအခြေခံကျကျကွဲပြားခြားနားခဲ့, သူသည် Uji အတွက်စွန့်ပစ်ဗိမာနျတျောအဘို့အကျိုတိုကျန်ရစ်သည့်နိုင်ငံရေးပဋိပက္ခရှောင်ရှားရန်။ နောက်ဆုံးတော့သူ Uji အတွက်ဗိမာနျတျော Kosho-horinji တည်ထောင်ရန်လိမ့်မယ်။ Dogen နောက်တဖန်အမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်အသက်ရှည်သမျှလူမှုရေးသင်တန်းများနှင့်လူတန်းစားပေါင်းစုံမှကျောင်းသားများကိုယူခြင်းအားဖြင့်အျောသိုဒေါကိုလျစ်လျူရှုခဲ့သည်။
1243 ခုနှစ်တွင်သူတစ်ဦးများသည်မင်းမျိုးအနွယ်ဝင် Lay ကျောင်းသား, သခင် Yoshishige Hatano ကနေပွညျသူပွညျသားတစ်ဦးကမ်းလှမ်းမှုလက်ခံခဲ့သည်။ အဆိုပါမြေယာဂျပန်ပင်လယ်ပေါ်တွင်ဝေးလံခေါင်သီ Echizen ခရိုင်၌ရှိ၏, ဒီမှာ Dogen ထူထောင် Eiheiji ယနေ့ဂျပန်တွင် Soto ဇင်၏နှစ်ခုခေါင်းကိုဘုရားကျောင်းတဦး။
Dogen သူ Eiheiji ၏ Abbott ကသူ၏တရားဓမ္မအမွေဆက်ခံသူ Koun Ejo အမည်ရှိနှင့်သူ၏နာမကျန်းများအတွက်အကူအညီရှာကြံကျိုတိုခရီး 1252. အတွက်နေမကောင်းကျဆင်းခဲ့သည်။ သူဟာ 1253 ခုနှစ်ကျိုတို၌သေကြ၏။
Dogen အရေးအသား၏ကြီးမားသောခန္ဓာကိုယ်က၎င်း၏လှပမှုနှင့်ပရိယာယ်များအတွက်ကျင်းပကျွန်တော်တို့ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။ မကြာခဏသူသည်မိမိမူရင်းမေးခွန်းပြန်လည်ရောက်ရှိ - အားလုံးသတ္တဝါတွေဗုဒ္ဓသဘာဝနှင့်ပြည့်စုံနေတယ်ဆိုရင်, အလေ့အကျင့်များနှင့်သစ္စာဉာဏ်အလင်း၏အချက်ကားအဘယ်သို့နည်း အပြည့်အဝဤမေးခွန်းကိုမထိုးဖောက်အစဉ်အဆက်ကတည်းက Soto ဇင်ကျောင်းသားတစ်ဦးစိန်ခေါ်မှုဖြစ်ခဲ့သည်။ အလွန်ရိုးရှင်းစွာ, Dogen အလေ့အကျင့်တစ်ခုဗုဒ္ဓ "ဖြစ်စေ" သို့မဟုတ်ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်သို့လူသားတွေကိုဖွင့်တော်မမူကြောင်းအလေးပေးပြောဆိုခဲ့သည်။ အစား, အလေ့အကျင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဉာဏ်အလင်းသဘောသဘာဝတစ်ခုစကားရပ်, ဒါမှမဟုတ်ပေါ်ထွန်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အလေ့အကျင့်သစ္စာဉာဏ်အလင်း၏လှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပါတယ်။ ဇင်ဆရာ Josho Pat Phelan ကပြောပါတယ်
"ဒါကြောင့်ပင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အလေ့အကျင့်ပြုပါ, ဒါပေမယ့်ဗုဒ္ဓကျနော်တို့ပြီးသားထိုကြောင့်, သဘောပေါက် Non-dual-အားထုတ်မှုမဟုတ်ဘဲရလဒ်ဒါမှမဟုတ်တချို့အစောပိုင်းကအလေ့အကျင့်များစုဆောင်းခြင်းများ၏အလေ့အကျင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျင့်သောသူ၌နေသောသူမဟုတ်ပါဘူး။ Dogen သဘောပေါက် '' ဟုပြောသည် ယေဘုယျမဟုတ်သလိုအထူးသဖြင့်မ, အလိုဆန္ဒမပါဘဲကြိုးစားအားထုတ်မှုပင်ဖြစ်သည်။ ' "
အားလုံး Guru Nanak ၏မွေးဖွားခြင်းအကြောင်း
Aurangzeb ရန် Guru Gobind Singh က မှစ. အက္ခရာများ (1705)
Secuestro internacional က de niños: cómo evitarlo ဏ lograr restitución
ဧရာတက္ကဆက်ပြည်နယ်အမွီးကခလောကျသံပွုတတျသောမွှေဆိုး # 2
မင်နီဆိုတာပြည်နယ်တက္ကသိုလ် Mankato အဆင့်လက်ခံရေး
ရောမ Ludi Scaenici များစာရင်း
Jules Verne: သူ၏ဘဝနှင့်စာပေများ
အဆိုပါ Hummer ရှိအေးမြယာဉ်အင်္ဂါရပ်များ
မုတ်ဆိတ်မွေး Fireworms: လက်နက်ရှောင်ခြင်းနှင့်ကုသခြင်း
အကြံပြု High School တွင်ကျောင်းဆင်းပွဲလက်ဆောင်များ
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က Black Feminist အဖွဲ့အစည်း (NBFO)
အဆိုပါ Nokian Hakkapeliitta R ကို၏ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
Grammar အတွက် attribute Noun